चित्रमान मारिएको विभत्स तस्विर, उनकै फेसबुकमा पोष्टभएपछि…. « Janata Samachar
चित्रमान मारिएको विभत्स तस्विर, उनकै फेसबुकमा पोष्टभएपछि….
प्रकाशित मिति :9April, 2018 10:46 am
रसुवा । बेत्रावती ट्रिनिटी इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक २९ वर्षीय चित्रमान डंगोल ११ दिनदेखि बेपत्ता भए । चैत १५ गतेदेखि बेपत्ता उनलाई खोज्न परिवारले निकै प्रयास गरिरहे तर पनि फेला पार्न सकेनन् तर आइतबार राति डंगोलको बिभत्स शव उनको फेस बुकमा पोष्ट भएको छ ।
चित्रमानको फेसबुकमा राति १० बजेर ४५ मिनेट जाँदा ‘१२ वर्षअघि भाइलाई छुरा हानेको बदला लिनका लागि मारेको’ स्टाटससहित शबको बिभत्स तस्विर पोष्ट भएको हो । चित्रमानको हत्या र तस्विर पोष्ट गर्नेको भने अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन ।
उत्तरगया गाउँपालिका ५ लहरेका २९ वर्षीय चित्रमानको हत्या भएको उनकै फेसबुकबाट खुलासा भएपछि घटना सनसनीपूर्ण बनेको छ । मृतकका आफन्तसहित बासिन्दाले हत्याराको पहिचान र कारवाही माग गर्दै सोमबार रसुवा बन्द गरेका छन् ।
मृतकका आफन्तले बेपत्ता भएकै दिन खोजी गर्नको लागि प्रहरीमा निवेदन दिए पनि सुरक्षा निकायले त्यसप्रति खास्सै चासो नलिएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक शरतकुमार थापा क्षेत्रीले भने खोजी कार्यमा तीब्रता दिए पनि फेला नपरेको बताए ।
चैत १५ गते आफ्नो घरबाट स्याफ्रुबेँसीका लागि हिँडेका डंगोलले दिन राति १० बजे आफू स्याफ्रुबेँसी पुगेको जानकारी गराएका थिए । उनी त्यसपछि सम्पर्कविहीन बनेका हुन् ।